सिंहदरबारमा चोरको बिगबिगी: प्रधानमन्त्रीले रोपेको बिरुवादेखि गाडीको टायरसमेत गायब | नेपाली जनता :: Nepali Janta:
सिंहदरबारमा चोरको बिगबिगी: प्रधानमन्त्रीले रोपेको बिरुवादेखि गाडीको टायरसमेत गायब
( Words) 1 second
काठमाडौं । मुलुककै प्रमुख प्रशासनिक मूख्यालय हो, सिंहदरबार । यहाँ सेना, प्रहरी र गुप्तचरमात्रै होइन, सीसीटीभी क्यामराबाट समेत चौबीसै घण्टा निगरानी भइरहन्छ ।
तर यही स्थानबाट पटक/पटक चोरीका घटना दोहोरिएका छन् । गत १ चैतमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयबाटै मोटरसाइकल चोरी भयो । पार्किङ गरी राखेको अवस्थामा बा१ब ९९१३ नम्बरको सरकारी मोटरसाइकल मन्त्रालयबाटै चोरी भयो । त्यसको एक सातापछि प्रहरी, चोरी गर्ने व्यक्ति पक्राउ गर्न सफल भयो ।
महानगरीय प्रहरी वृत्त सिंहदरबारका प्रमुख डिएसपी अपिल बोहोराका अनुसार मन्त्रालयका कार्यालय सहयोगी रमेश सुनारले मोटरसाइकल चोरी गरी आफ्नै भाइ दिनेश सुनारलाई दिएका थिए । दिनेशले चितवन पुर्‍याएर मोटरसाइकल चलाउन थालेका थिए । इलाका प्रहरी कार्यालय टाँडी, चितवनको समन्वयमा अन्ततः उनी पक्राउ परे ।
मोटरसाइकल चोरीको यो घटना त पछिल्लो उदाहारण मात्र हो । पछिल्लो दुई वर्षको अवधिमा मात्र सिंहदरबारभित्र ६ वटा चोरीका घटना भएको उजुरी प्रहरीमा छ ।
सिंहदरबारमा चोरीको श्रृङ्खला
२६ जेठ २०७३ मा प्रधानमन्त्री कार्यालय नजिकै प्रधानमन्त्रीले रोपेको बोधिचित्तको बिरुवा गायब भएको थियो । तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विभिन्न प्रकृतिका बिरुवा रोपेर सिंहदरबारलाई हरियाली बनाउने अभियान थाल्दै बोधिचित्तका दुईवटा बिरुवा रोपेका थिए । तर, दुई हप्ताकोबीचमा त्यो बिरुवा नै गायब भयो ।
त्यसको दुई महिनापछि १२ साउन २०७३ मा हालको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट आइफोन, ल्यापटप र एक लाख रुपैयाँ नगदसमेत चोरी भयो । मन्त्रालयका उपसचिव चिरञ्जीवी तिमल्सिनाको कार्यकक्षबाटै ती वस्तु र नगद चोरी भएका थिए ।
त्यसलगत्तै १२ पुस २०७३ मा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबाट ल्यापटप हरायो । मन्त्रालयकी शाखा अधिकृत शुष्मा श्रेष्ठले ल्यापटप गुमाएकी थिइन् ।
चोरीको श्रृंखला यतिमामात्रै सीमित रहेन त्यसको करीब एक वर्षपछि गत पुसमामात्रै सिंहदरबारमा चोरीका दुईवटा घट्ना भए । गत १ पुसमा सिंहदरबारको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय परिसरबाट गाडीको चारवटै टायर चोरी भएको थियो । मन्त्रालयका झोलुङ्गे पुल शाखाको बा१झ २९२७ नम्बरको टोयटा हाइलक्स गाडीका चारवटै टायर चोरी भएको थियो । यो घट्नाले निकै चर्चा पायो ।
यो पनि पढ्नुहोस प्रचण्ड माधव पक्षले भने, 'विप्लसँग सार्थक वार्ता गर,‘स्टन्ट’ नबनाऊ'
पुस अन्तिम साता नै सिंहदरबार पुनर्निर्माण कार्यालयमा रहेको क्यान्टिनबाट ४२ हजार रुपैयाँ नगद र विभिन्न सामानहरू चोरी भए ।
सिंहदरबारभित्र चोरीको पछिल्लो घटना गत १ चैतमा घट्यो । उक्त दिन महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयको पार्किङ स्थानबाट सरकारी मोटरसाइकल नै हरायो ।
कडा सुरक्षा उपस्थिति रहेको सिंहदरबारमा पटक-पटक दोहोरिएका चोरीका घटनाले सुरक्षा संयन्त्रमाथि नै प्रश्न उठाएको छ ।
कसले गर्छ चोरी ?
चैत १ गते भएको मोटरसाइकल चोरीमा मन्त्रालयकै कार्यालय सहयोगीको संलग्नता भेटियो । त्यस्तै, गत पुस १ गते भएको गाडीको टायर चोरीमा पनि सरकारी गाडी चालककै संलग्नता भेटियो ।
यी उदाहरणलाई हेर्दा सिंहदरबारभित्रकै कर्मचारीहरू चोरीमा संलग्न हुने गरेको पुष्टि हुन्छ ।
महानगरीय प्रहरी बृत्त सिंहदरबारका प्रमुख डिएसपी अपिल बोहोरा भन्छन् – ‘कडा सुरक्षा व्यवस्था र प्रवेश पास पनि सहजै उपलब्ध नहुने भएकाले सामान्य मानिस सिंहदरबार छिर्नै कठिन छ, परिवेश पनि सहज नहुने भएकाले उनीहरूले चोरी गर्ने सम्भावनै न्यून हुन्छ ।’
उनका अनुसार कतिपय घटनामा चोरीका खबर बाहिरीए पनि प्रहरीकोमा उजुरी नआउँदा चोरीमा संलग्नहरूले सहजै उन्मुक्ति पाइरहेका छन् ।
१३,चैत्र.२०७४,मंगलवार १२:०० मा प्रकाशित
← विशेषज्ञ डाक्टरको अध्यन शुल्क आठ लाख घट्यो, अब २३ लाख मात्रै
निजी विद्यालयको मनोमानी : मापदण्डको तेब्बरभन्दा बढी शुल्क ! →
कर्णाली प्रदेशमा उत्पादित बिजुली पहिलो पटक राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा
१८ मिनेट अगाडी
चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्‍यक्ष प्रा.डा. श्रीकृष्ण गिरीको गाडीमा अज्ञात समूहले गरे आक्रमण
प्रधानमन्त्री देउवा र राष्ट्रपति भण्डारीबीच भेटवार्ता
माओवादी केन्द्रका नेता एवं स्कुल विभाग प्रमुख गिरिराजमणि पोखरेललाई कोरोना संक्रमण
सप्तरीमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या तीन पुग्यो
पछिल्लो २४ घण्टामा ८ हजार १७ जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि, १५ जनाको मृत्यु